ပရိုဂရမ်များမပါပဲ Facebook ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ပရိုဂရမ်များမရှိဘဲ Facebook ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် YouTube ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ဒေါ်လာသန်း ၁၆၀၀ ကျော်ဖြင့်ဂူဂဲလ်ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်ကတည်းက၎င်းသည်ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပို့ရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ una ကြင်နာ ဝီကီပီးဒီးယားမှအသံ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှာဖွေဖို့။
သို့သော်မည်သူမဆိုဗီဒီယိုများတင်ခွင့်ပြုသည့်တစ်ခုတည်းသော platform မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့အားအမြတ်အစွန်းအများဆုံးပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook က, Vimeo, Instagra, Twitter တို့သည်အခြားသူများနှင့်မျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုများကို upload ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။ YouTube ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကူးယူခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဗွီဒီယိုများကိုမည်သို့ download ရယူနိုင်သနည်း။
ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောပြproblemsနာများ Instagram ကိုကနေဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်Facebook ကဗွီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ် သူတို့တူညီတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်။ နည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုစီအတွက်တရား ၀ င်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေတရား ၀ င်သည်ဖြစ်စေ (၎င်းကိုတရားမဝင်ဟုမခေါ်ဆိုရန်) နည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုစီအတွက်ဖြေရှင်းနည်းရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောမည်သည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်မူတည်ပြီး၊ Facebook ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများသည်ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်အောက်တွင်သင့်အားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းအားလုံးကိုပြသသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဗွီဒီယိုများကူးယူပါ iPhone၊ Android၊ PC၊ Mac (သို့) Ubuntu မှဖြစ်သည်။
1 Facebook post link ကိုကူးပါ
2 မည်သည့်ပလက်ဖောင်းမှမဆို Facebook ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
3 Facebook ဗီဒီယိုတွေကို Chrome ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
3.1 ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက်ဗွီဒီယို Downloader
3.2 ဗွီဒီယို Downloader Plus
Facebook post link ကိုကူးပါ
တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုအသုံးမပြုခင်ပထမဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ post link ကိုကူးယူ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိုသောဗွီဒီယိုပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော platform ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ link ကိုရယူချင်သောထုတ်ဝေထံသို့သွားနှင့် drop-down menu ထဲက option ကိုရွေးပါ, ပုံ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ထုတ်ဝေ၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိ Share ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ လင့်ခ်ကူးပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာစမတ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကနေအတူတူပါပဲ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ဝေမှု၏လင့်ခ်ကိုမည်သို့ကူးယူနိုင်သည်ကိုသိပြီဆိုပါစို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း.
မည်သည့်ပလက်ဖောင်းမှမဆို Facebook ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Chrome, Safari နှင့် Firefox browser များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှအကြောင်းအရာများကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုပါ ကွန်ပြူတာကနေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Facebook စာမျက်နှာများ (သို့) အခြားအကြောင်းအရာများကို download ပြုလုပ်ရန်ကူညီမည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
SaveFrom ဝက်ဘ်ဆိုက်ကမည်သည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်း၌တွေ့ရသောမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆို download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ရုံသာရှိသည် SaveFrom y post link ကို paste လုပ်ပါ ဗီဒီယိုတည်ရှိရာဘယ်မှာ။
ထို့နောက်ထိုထုတ်ဝေမှု၏အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စာရင်းပေးသွင်းရန်ငွေပေးချေရန်ခွင့်ပြုသည့် option တစ်ခုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုအထက်ပုံတွင်မည်သည့်နေရာတွင်အစားထိုးရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ရမည် ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
၎င်းသည် (အကယ်၍ ကွန်ပျူတာသုံးပါက) ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ကြားလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်အကြံမပေးပါဤသို့မဟုတ်အခြားပလက်ဖောင်းများမှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အချိန်တွင်ကူညီမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုမှဒေတာများကိုသာစုဆောင်းလိုသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဗွီဒီယိုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောနောက်ထပ်ကိရိယာတစ်ခု မည်သည့်ကိရိယာမှတဆင့် ဝက်ဘ်နဲ့အတူပါ ဗွီဒီယိုသိမ်းပါ။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည် SaveFrom နှင့်အတူတူကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိုသောဗွီဒီယိုတည်ရှိရာထုတ်ဝေမှု link ကိုကပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။
SaveFrom နှင့်မတူဘဲ၊ ဗွီဒီယိုအားဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည် မူရင်းအရည်အသွေးသို့မဟုတ်နိမ့်အရည်အသွေးက download လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာထဲမှာနေရာနည်းသွားတယ်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွင်မည်သည့် application ကိုမျှတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ Facebook မှဗီဒီယိုများကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် Facebook က Video Downloader ငါတို့လုပ်ရမယ့်ယခင်နှစ်ခုနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့စာမျက်နှာ ငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ link ကို paste လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုရွေးပါ ငါတို့ download လုပ်ချင်တယ် ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည် Microsoft ၏ Chrome နှင့် Edge Chromium ဘရောက်ဇာအတွက် web extension တစ်ခုကိုလည်းပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အား desktop ကွန်ပြူတာမှ Facebook ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရန်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။
မည်သည့် application ကိုမှတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင် Facebook မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာမရှိပါ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဤပလက်ဖောင်းမှဗီဒီယိုများကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအာမခံသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများစွာကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်များစွာသောသူတို့က၎င်းဗီဒီယိုကိုလင့်ခ်တွင်မတွေ့ပါသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဗွီဒီယိုများ၊ အပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လျှောက်လွှာကိုတပ်ဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မဆို၊ malware (သို့) စပိုင်ဝဲများပါ ၀ င်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က "m" ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ link ၏ရှေ့မှောက်၌ဗီဒီယိုကို download လုပ်နိုင်သည် ဒီလှည့်ကွက်ကို Facebook ကပိတ်ထားတယ် Desktop ကွန်ပျူတာမှပြုလုပ်ပါကစမတ်ဖုန်းမှသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုစမတ်ဖုန်းမှသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုနှိပ်သည့်အခါ Download video option သည်ဘယ်တော့မှပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ထပ်ခါထပ်ခါကြိုးစားရန်မလိုအပ်ပါ။
Facebook ဗီဒီယိုတွေကို Chrome ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
၀ က်ဘ်မှတစ်ဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအသုံးမပြုလိုပါကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသော extension များထဲကတစ်ခုသုံးပါ Facebook မှဗွီဒီယိုများကူးယူရန်ခွင့်ပြုပေးသောဘရောက်ဇာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။
အမှန်တကယ်အားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား Facebook ဗီဒီယိုများကို Chrome ဝက်ဘ်စတိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောတိုးချဲ့မှုအမြောက်အမြားရှိသော်လည်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက်ဗွီဒီယို Downloader။ ဒီ extension ကိုနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Chrome, Edge ခရိုမီယမ်, Vivaldi, Brave ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုက်ဖက်တဲ့ browser တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကြည့်ပြီး Install ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ လက်ျာဘက်၌ icon တစ်ခုပြပါလိမ့်မယ် လိပ်စာဘားမှ။ ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်သော Facebook ထုတ်ဝေမှု link ကိုကူးယူပြီးပြီဆိုလျှင်ထို link နှင့် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီး extension ကိုနှိပ်ပါ။ ကျနော်တို့က link ကိုကတည်းကအမြန်ဖြစ်ဖို့ရှိသည် အခြားဗီဒီယိုများကိုလည်းတင်ပေးလိမ့်မည်, သူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် extension တွင်ပြလိမ့်မည်ဗီဒီယိုများ။
ဗွီဒီယိုကိုကူးယူရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဗီဒီယိုကိုသာရှာဖွေရန်လိုအပ်သည် download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီဗီဒီယိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းရဲ့ download ဖိုင်တွဲထဲကိုအလိုအလျောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဗွီဒီယို Downloader Plus
ဗီဒီယိုများကို browser မှတစ်ဆင့်ကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည့် FBDown ဝက်ဘ်ဆိုက်ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည် သင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှ Chrome ကိုတိုးချဲ့မည်။ ဒီ extension ကိုခေါ်သည် ဗွီဒီယို Downloader Plus ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယခင် extension နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Browser မှ link ကို paste လုပ်သောအခါ extension icon ကိုနှိပ်ပြီး download လုပ်ချင်သော video ၏အမည်ကိုရွေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်မည့်အစား download ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့ကို FBDown ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ redirect လိမ့်မယ် သင်တိုက်ရိုက် download link ကိုရှာတွေ့နိုင်ဘယ်မှာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » ပရိုဂရမ်များမရှိဘဲ Facebook ဗီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
အကောင်းဆုံးအခမဲ့သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှု